Mid kamid ah dalalka Khaliijka oo ka biyo diidan inuu xiriir la yeesho Israa’iil | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Mid kamid ah dalalka Khaliijka oo ka biyo diidan inuu xiriir la...
Mid kamid ah dalalka Khaliijka oo ka biyo diidan inuu xiriir la yeesho Israa’iil
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalkaasi, Sayid Badar Bin Xamad Bin Xamuud Al-busaydi waxa uu hadalkaasi ku sheegay Wareysi Khaas ah oo uu siiyey Wargeyska Asharq Al-Awsat ee saldhigiisa dhexe ku yaallo magaalladda London ee dalka Britain.
“Marnaba, Cumaan ma noqon doonto dalka saddexaad ee Gacanka Carbeed ee Xiriirka Diplomasi la yeeshay Israel” ayuu yiri Wasiirka oo wax laga weydiiyey Wicitaan uu dhawaan la yeeshay dhigiisa Israel, Yair Lapid.
Waxa uu hadalkaasi kaga jawaabay war ay Warbaahinta Dowladda Cumaan bishii hore ku shaacisay Wada-hadalka Telefoon ee labada Wasiir Arrimo Dibedeed ee Cumaan iyo Israel dhex maray.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalkaasi, Sayid Badar Bin Xamad Bin Xamuud Al-busaydi waxa uu tilmaamay inuu dalkiisa taageersan yahay Xaqiijinta Nabad waarta oo caddaalad ah, isla markaana asaas looga dhigo xalka Labada Dowladood ee Qaddiyada Falastiin iyo Israel.
Waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyey inay arrintaasi tahay Ikhtiyaarka ama xulashada keliya ee lagu xalin karo arrintaasi.
“Waxaan taageeraynaa Xuquuqda Sharciga ee dadka Reer Falastiin leeyihiin, waxaana xushmeyn doonaa Go’aanadda Madax-banaanida Dowladaha, iyagana waxaan ka rajeynaynaa inay xushmeeyaan Go’aanadeena madaxa-banaan” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Cumaan oo Wareysi siiyey Wargeyska Asharq Al-Awsat.
Maqaal horeMaamulka Gobolka Banaadir oo Qatar kala hadlay Arrin muhiim ah
Maqaal XigaTaliyaha Ciidanka Xoogga oo gaaray Buulo-burte iyo ujeedka safarkiisa